जाडोमा हिटर ताप्दै हुनुहुन्छ ? ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु पढ्नुहोस् – GoodNews24 – Good News24
Home/गुड न्यूज 24/जाडोमा हिटर ताप्दै हुनुहुन्छ ? ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु पढ्नुहोस् – GoodNews24
जाडो महिना लागे संगै चिसो बढ्दै गइरहेको छ । जाडोको कारण मानिसहरुको दैनिक कामहरु पनि प्रभावित बन्न पुगेका छन् । जाडोबाट बच्नका लागि साथै चिसोबाट बच्न अन्य धेरै प्रकारका ताप दिने उपकरण तथा सामान प्रयोग गर्छन । धेरै मानिसहरु न्यानोका लागि ब्लोवर (तातो हावा फाल्ने उपकरण ) तथा हिटरको प्रयोग गर्ने गर्छन् । यद्यपि यसले मानिसको छालामा पार्ने असरको विषयमा भने उनीहरु अनविज्ञ हुन्छन् । हिटर बाल्दा ध्यान नदिदा आगोलागी भएका र मानिसको मृत्युसमेत भएका घटनाहरु घट्ने गर्छन । त्यसैले हिटर वा ब्लोअर चलाउँदा आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्यको ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि निम्न कुराहरुमा ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ ।
रनर मोटरसाइकलले ल्यायो ५१ हजार सम्मको नगद छुट सहितको अफर-Goodnews24
मध्यरातिदेखि मदिरा बिक्री गर्न नपाईने-GoodNews24